बिहे नहुँदै विक्की कौशलले दिए कट्रिनाकी आमालाइ यति ठुलो उपहार – Kavrepati
अमेरिकामा रमाउँदै थापा परिवार, हेराैँ तस्बिर
फुटबल बादशाह म्याडोनाको हराएको घडी असाममा भेटियो, भारतीय नागरिकले चोरेको खुलासा
अमेरिकामा आँधी, १०० भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको आशंका
कट्रिना कैफ-विक्की कौशलको विवाहमा कट्रिनाले लगाएको औंठीको मूल्य कति होला ?
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर २६ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
चिनियाँ वैज्ञानिकले को’भिड-१९ का सबै भेरियन्ट मा’र्ने ‘एन्टिबडी’ पत्ता लगाएको दाबी
२२ बर्षे युवती बिबाह गरेका ७२ बर्षका बाजेलाई ससुराली जाँदा सासुले कु, टेर खेदाइन,बाजे बोजु रुदै फर्किए-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
बाघको चाहनाबारे छोटो रोचक तथ्य जानौं
निखिलको ‘४ करोड मँहगो’ डिभोर्सः २० वर्षपछि टुट्यो सगोत्री विवाह (अन्तरकथा)
Home / मनोरंजन / बिहे नहुँदै विक्की कौशलले दिए कट्रिनाकी आमालाइ यति ठुलो उपहार
बिहे नहुँदै विक्की कौशलले दिए कट्रिनाकी आमालाइ यति ठुलो उपहार
admin December 6, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 113 Views
विक्की कौशल र कट्रिना कैफको विवाह यतिबेला चर्चामा छ । यो जोडीले विवाह गर्न लागेको र त्यसको तयारी पनि तीब्र रुपमा भैरहेको खबर धेरैमा सार्वजनिक भएको छ । यसबारे विक्की र कट्रिनाले भने आफ्नो तर्फबाट मौन बसेका छन् ।
वास्तवमा, विक्की कौशलले पनि कट्रिनाको परिवारलाई पूर्ण समर्थन गरिरहेका छन् र उनलाई आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कुराको कमी महसुस गर्न दिइरहेका छैनन्।
त्यसैले अब विक्कीले कट्रिनाकी आमा र परिवारका सदस्यहरूलाई किनमेल गर्न कुनै समस्या नहोस् भनेर आफ्नो कार दिएका छन्। शनिबार कट्रिनाको परिवारले शहरमा किनमेल गर्न निजी कार लिएका थिए। यसपछि ५ डिसेम्बर अर्थात आइतवार विक्कीको कारमा कट्रिनाको परिवार देखियो । यतिबेलाको भिडियो र तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
विवाहको कुरा गर्दा विक्की र कट्रिनाले नोभेम्बर ९ मा राजस्थानको सिक्स सेन्स फोर्ट बर्वारामा विवाह गर्दैछन् । रिपोर्टका अनुसार यो जोडी ६ डिसेम्बरमा बिहेको लागि जयपुर प्रस्थान गर्नेछन् । त्यसपछि दुवै हेलिकप्टरबाट विवाहस्थल पुग्नेछन् । प्रि-वेडिङ फेस्टिभलको कुरा गर्दा यो डिसेम्बर ७ गतेबाट सुरु हुनेछ ।
Previous टिकटकबाट करोडौं कमाउने भाइरल मन्दिरा को हुन् ?
Next भारत छोडेर जान लागेकी बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन विमानस्थलबाटै पक्राउ
उनको नाम मधु छेत्री रहेको छ । उनी अहिले अलिक चर्चामा आइरहेका छिन। उन्को विभिन्न …